Iimpompo | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 28, 2007 NgoLwesithathu, Julayi 4, 2007 Douglas Karr
Namhlanje lusuku lweSikhumbuzo eMelika. Usuku lweSikhumbuzo lusuku apho samkela abo bahlawule elona xabiso liphezulu kuthi. Ukuhlonipha abafileyo bethu akusisiqinisekiso semfazwe, endaweni yoko, kukunika imbeko kwabo bangazange babuyele kubahlobo nakwiintsapho zabo.
Abantu abaninzi baphambanisa uSuku lwamaVeterans noSuku lweSikhumbuzo ... ezi zimbini zahluke kakhulu. Usuku lwamaVeterans luzukisa amaVeterans aphilayo okanye aswelekile, ekusenokwenzeka ukuba alwa okanye awazange anyanzeleke ukuba akhonze ilizwe labo. Usuku lweSikhumbuzo lolwabo balwa kwaye basweleka.
Njengoko ibali lihamba, uGeneral Butterfield wayengonwabanga ngumnxeba wokuCinywa kwezibane, evakalelwa kukuba umnxeba wawusemthethweni ukuba ubonakalise ukuphela kweentsuku, kwaye ngoncedo lwe-brigade bugler, u-Oliver Willcox Norton (1839-1920), wabhala ii-Taps ukuhlonipha amadoda akhe ngelixa ekampini eHarrison's Landing, eVirginia, emva kweentsuku ezisixhenxe zokulwa.
La madabi enzeka ngexesha lePeninsular Campaign yowe-1862. Umnxeba omtsha, wavakala ngobo busuku ngoJulayi, ngo-1862, wakhawuleza wasasazeka kwezinye iiyunithi zoMkhosi woManyano kwaye kwathiwa nazo zazisetyenziswa zii-Confederates. Iitephu zenziwa umnxeba osemthethweni emva kwemfazwe.
Ukusuka kwiWebhusayithi yeTaps Bugler.
[iaudio: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/05/taps.mp3]
Iimpompo zazingezizo ezokwenyani, zazibhalwa kwifowuni efanayo, ebizwa ngokuba yiTattoo, eyayidlalwa kwiyure enye ngaphambi kokuba amajoni afanele ukuphelisa usuku kwaye alale. Abanye abantu nabo abaqondi ukuba amazwi abhalelwe iiTaps, isimemo esihle kodwa esothusayo esidlalwayo ukuhlonipha abazalwana noodadewethu abawileyo:
Usuku lwenziwe, ilanga
Ukusuka ezindulini, echibini,
Konke kulungile, phumla ngokukhuselekileyo,
Kuphela ukukhanya; Kwaye kude
Iyahamba imini, kunye neenkwenkwezi
Usale kakuhle; Usuku luye,
Umbulelo nendumiso, Kuba imihla yethu,
Ngaphambi kwelanga, Ngaphantsi kweenkwenkwezi,
Njengoko sihamba, Oku siyakwazi,
Namhlanje kukwasisikhumbuzo seminyaka engama-25 ISikhumbuzo seVeteran Vietnam.
Meyi 28, 2007 kwi-11: 32 AM
Ngaba uye waqaphela ukuba uGoogle wanika amagqala e-shaft kwakhona kulo nyaka ngokunganikezeli ngelogo yoSuku lweSikhumbuzo? Bahlonipha yonke into ukusuka kuMhla woMhlaba ukuya kuSuku lweNkululeko, kodwa kutheni uGoogle engabathandi bezilwanyana?
Meyi 29, 2007 kwi-11: 46 AM
Inika umdla loo nto – andizange ndiyiphawule loo nto ngaphambili. Ndiyathemba ukuba asiyonto iqingqwe kwangaphambili. Ubuncinci iflegi yaseMelika entle etyalwe kwingca ethile iya kuba mnandi. Kuxelwe ukuba babeke i-logo yosuku lweSikhumbuzo eCanada eyayinePoppies kuyo, kodwa akukho nto apha.
Okubangela umdla kukuba, uAl Gore usebhodini labo. Mhlawumbi angabonisa inkxaso yakhe kumaqhawe ethu awileyo ngokuthetha nawo.